Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada » Canada na-akwado ụlọ ọrụ iche iche nke nchekwa onwe onye nchekwa COVID-19 na Waterloo, Ontario
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Gọọmentị Canada na-anọgide na-echebe ahụike na nchekwa nke ndị Canada ma belata mgbasa nke COVID-19 na Canada. Nwepu onwe onye bụ otu n'ime ụzọ kachasị dị irè iji nyere aka ịkwụsị mgbasa nke COVID-19. Agbanyeghị, nye ụfọdụ ndị Canada, ọnọdụ obibi na ọnụ ụlọ ndị mmadụ jikọtara ọnụ nwere ike ime ka ọ ghara ịdị mma ma ọ bụ ghara ikwe omume ịnọrọ onwe ya, na-abawanye ohere nke ibute obodo.
Taa, Honorable Bardish Chagger, Mịnịsta nke Di iche iche na Nsonye na ndị Ntorobịa, na nnọchite nke Honorable Patty Hajdu, Mịnịsta Ahụike, kwupụtara $ 4.1, ihe karịrị ọnwa 15, maka Mpaghara nke Waterloo Public Health na Ọrụ Mberede iji gaa n'ihu na nchekwa, afọ ofufo ebe iche. Saịtị a mepere na Disemba 10, 2020 ma na - enyere ndị Canada bi na Waterloo Region aka Covid-19, ma obu ekpughere ya, nweta ulo iji chebe onwe ha na obodo ha.
Ebe ndị mmadụ na-ekewapụta onwe ya, na-ebelata ihe ize ndụ nke ịgbasa nje a n’etiti ndị ezinụlọ unu, karịchaa n’obodo ndị mepere emepe ndị Canada bijupụtara. Saịtị ndị a bụ otu n'ime ngwa ọrụ nzaghachi ngwa ngwa anyị nwere iji nyere aka ịkwụsị mgbasa nke COVID-19, a ga-eziga ha na obodo ndị na-eche ntiwapụ.
Usoro nchekwa nke afọ ofufo dị iche iche dị iji mejupụta oghere maka obodo ndị mepere emepe na obodo ndị nọ n'ihe ize ndụ nke nnyefe dị elu, dịka ihe akaebe na-egosi na ndị mmadụ sitere na obere ego na agbata obi ndị mmadụ na-emetụta nke ọma COVID-19, gụnyere ya ihe kachasị njọ.
Ebe ndị ahọpụtara n'okpuru Mmemme ahụ na-enye ebe etiti ebe ndị mmadụ amatapụtara nwere ike ịnọrọ onwe ha n'enweghị nsogbu maka oge achọrọ. Ndị ọrụ ahụike ahụike obodo ga-amata ndị tozuru etozu ndị enwere ike ịnye ha nhọrọ iji wega na saịtị nkewa iche na afọ ofufo. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mmadụ nwere COVID-19 nke dị mma ma biri n'ụlọ ebe enweghị ọnụ ụlọ dị iche iche ha nwere ike iche, a ga-ewere ha dị ka onye ga-esonye na saịtị nkewapụ onwe ya. A ga-atụle ndị si n'otu ezinụlọ ma ọ bụrụ, dịka ọmụmaatụ, ha enweghị ike idobe ebe dị anya site na okwu (s) dị mma.
“Ichebe ndị Canada site na COVID-19 na inye aka ịkwụsị mgbasa a bụ mbọ obodo. Usoro nchekwa nke afọ ofufo na-akwado obodo dị ka Waterloo Region ka ha nwee ike inyere ndị bi na onwe ha iche, mgbe ọ nwere ike isiri gị ike ịme ya.
Onye a na-asọpụrụ Patty Hajdu
Onye Minista Ahụike
“Enwere m nnukwu ekele maka ohere ego a ga-enye Waterloo Region na ọgụ anyị na-alụ megide COVID-19. Nye ọtụtụ n'ime ndị bi n'obodo anyị bụ́ ndị nwaleworo ihe dị mma ma ọ bụ ndị na-echere nsonaazụ ule, nke a bụ nkwado ha chọrọ ma ọ bụrụ na ha apụghị ịnọpụ iche n'ụlọ n'enweghị nsogbu. ”
Karen Redman kwuru
Oche mpaghara, Mpaghara Waterloo
“Anyị maara na nnyefe ụlọ bụ isi ihe na-akpata mgbasa COVID-19, ọkachasị mgbe ndị mmadụ enweghị ike ịnọrọ onwe ha. Ego a, iji hiwe ụlọ ọrụ iche na mpaghara anyị, ga-eme ka ikike anyị nwere ịkwado ndị bi na Waterloo Region mgbe ha na-enweghị ike ịkpapụ onwe ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'ụlọ.
Dọkịta Hsiu-Li Wang
Onye Nlekọta Ahụike nke Ahụike, Mpaghara nke Waterloo Public Health na Ọrụ Mberede
Waterloo Region bụ ebe nke anọ ịnata ego site na Mmemme Ntọala Onwe Mwepu, na-esote ego enyere Toronto Public Health, Peel Public Health na Ottawa Public Health.
Saịtị a nwere ihe ruru ime ụlọ 54 iji nabata ndị mmadụ n'otu n'otu na Waterloo ndị enweghị ike ịnọrọ onwe ha n'ụlọ.
Ebe ndị mmadụ bi na-eme ka o siere ụfọdụ ike ịnọrọ onwe ha n'enweghị nsogbu, na-atụnye ụtụ n'ihe ize ndụ dị elu nke ibute COVID-19.
A ga-eduzi nlekota na mkpesa oge niile banyere ebe nrụọrụ nkewapụta afọ ofufo dị mma maka ịhazi ndị ọrụ ahụike ọha na eze.
A ga-akwado nkesa nke omume kacha mma n'etiti saịtị ndị ahọrọ ahọrọ iji bulie arụmọrụ saịtị yana njikwa nke ọrụ na ndị Canada na-enweta saịtị ahụ.
Iji gbochie mgbasa nke COVID-19, a dụrụ ndị Canada ọdụ ka ha soro usoro ahụike ọha na eze, zere ebe ndị na-enweghị njikwa ebe iji belata mgbasa nke COVID-19, ma nọrọ n'ụlọ ma ọ bụrụ na ha nwere mgbaàmà ọ bụla.